Indonezia: Fitarainana nidirana am-ponja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2009 19:44 GMT
Adi-hevitra mamaivay eo amin'ny tontolom-bolongana Indoneziana amin'izao fotoana izao ny raharaha Prita Mulyasari, renim-pianakaviana mananjanaka roa. Nametraka taratasy fitarainana an-tserasera [id] nitory hopitaly mamahantena any Tangerang, iray amin'ny tanàna manodidina an'i Jakarta ny anao vavy, kanjo ankehitriny dia iharan'ny fiampangana nandìka ny lalàna toko faha-27 andininy faha- 3 amin'ny Lalàna mifehy ny vaovao sy serasera [Elektrônika] (UU ITE) [id].
Nitantara ny nanjò azy noho ny nataon'ny hopitaly izy tamin'ny taratasy ifandefanana anaty vondron-tserasera iray (mailing-list). Nametraka fitoriana ara-panjakana taminy ny hopitaly. Mety hahazoana sazy fampidirana am-ponja hatramin'ny enimbolana sy onitra hatramin'ny 1 miliara ropia (manakaiky ny US$ 98 000) io taratasy nalefa tamina vondron-tserasera io.
Nilaza ny heviny tao amin'ny bolongany i Erwin Mulyadi, niteny hoe:
Tahaka ny miverin-dalana izany isika, ho lasa rendrarendra eto amin'ny firenena izany fahalalaham-pitenenana izany. Mety iharan'ny toko “fanalam-baraka” ao amin'ny Lalànan'ny vaovao sy ny serasera isika raha vao diso famindra kely fotsiny raha vao mialza zavatra aty an-tserasera aty.[…]Mampalahelo ahy ity raharaha ity; araka ny hevitro manokana ny tanjon'ny toeram-piasana rehetra (tafiditra aoa ny hopitaly) dia manao izay hahazoan'ny mpanjifa ao amin'ny fahafaham-po. Tsy maintsy mampalahelo anay raha mampiditra am-ponja avokoa ny karazana tsikera rehetra (na dia nosoratana tao anatin'ny fahatezerana aza sy maka fironana izay mety hanelingelina ny fahalalam-pomba aza), izahay izay manoratra aty amin'ny tontolo virtoaly sy mpamaham-bolongana heverina ho olom-pirenena mpanao gazety mahalala zavatra misimisy kokoa ny amin'izany atao hoe “fahalalaham-pitenenana”. Na dia heverina ho mandainga aza ve i Prita dia ho tafahoatra tahaka izao ny asetry azy (araka ny lalàna)? Efa azontsika eritreretina avy hatrany ny fiantraikan'izao toe-draharaha izao amin'ny mpanoratra mpitsikera mba “hametraka ny resaka amin'ny toerany” sy ny fiheverana avy hatrany fa lasa “fanalam-baràka” ny fitsikerana.
Lahatsoratra iray ao amin'ny daily social no nanambara hoe:
Tena mampalahelo tokoa raha ny zavatra nosoratanao taty amin'ny aterineto no mety hampiditra anao any am-ponja. Mba maheno ihany isika isan'andro ny fitarainana ataon'ny olona amin'ny orinasa isan-karazany any anaty gazety any, saingy tsy mbola naheno mihitsy aho hoe nisy olona nosamborina (satria nandefa taratasy fitarainana tany amin'ny gazety). Angamba tokony hitaraina anaty gazety isika fa tsy aty an-tserasera? Eto indrindra aloha dia taratasy fitarainana no nidirana am-ponja, fa rehefa tena mamaky azy isika dia fitarainana nosoratana (tsy nilaza anarana) an-tserasera aloha izy ity. Tena mahaliana ity raharaha ity satria maneho miharihary fa tsy mahalaza tsikera ny Indoneziana, na dia heverina ho mpanjaka aza ny mpanjifa. Raha hitaraina ianao, tonga dia alefasoan-gazety (mivoaka taratasy) fa aza mankaty amin'ny aterineto. Mety hanaitra sy hahazo vahaolana aza manko ny fitarainana an-gazety fa mety hampiditra am-ponja kosa raha alefa aty an-tserasera. Izany ve no fahalalaham-pitenenana? sa Demaokrasia? Mampangorakoraka.
Niteny[id] ny Komitin'ny zon'olombelona (KOMNAS HAM) fa mihoampampana ny didimpitsarana nampiharana ny lalàna ITE anenjehana mpanjifa iray, efa nanambara moa ny komity fa hanampy amin'ny fiarovana ny nampangaina hahazoana ny rariny.
Mandrapiandry ny manaraka moa dia efa nampiasa ny fitaovantserasera ankafizin'ny any an-toerana farany ny mpampiasa aterineto Indoneziana ho psolovava ampahibemaso.
Nihanaresaka moa ity raharaha ity rehefa nanaiky ny hamerina ny hihevitra indray mandeha ity lalàna ITE ity indray ny Fitsarana Tampony Indoneziana.
Hisy fakana am-bavany an'i Prita moa amin'ny herinandro.